Iindaba - Imbali yokuhombisa ubugcisa bentsimbi
Imbali yokuhlobisa ubugcisa besinyithi
Oko kubizwa ngokuba bubugcisa bentsimbi kunembali ende. Iimveliso zobugcisa bentsimbi yesiNtu zisetyenziselwa ukuhombisa izakhiwo, amakhaya kunye nezitiya. Iimveliso zentsimbi zokuqala zaveliswa malunga ne-2500 BC, kwaye uBukumkani bamaHeti e-Asia Minor bubonwa ngokubanzi njengendawo yokuzalwa yentsimbi.
Abantu bommandla wamaHeti eAsia Minor babelungisa iintlobo ngeentlobo zeemveliso zentsimbi, ezinjengeepani zentsimbi, amacephe entsimbi, iimela zasekhitshini, izikere, izikhonkwane, amakrele nemikhonto. Ezi mveliso zentsimbi zirhabaxa okanye zilungile. Ukuthetha ngokuthe ngqo, ezi mveliso zobugcisa bentsimbi kufuneka zibizwe ngokuba yi-ironware ukuba ichaneke. Ixesha elihambayo, inzululwazi kunye neteknoloji ziye zaphuhliswa, kwaye iindlela zokuphila zabantu kunye nezinto eziyimfuneko zemihla ngemihla zitshintshile suku ngalunye. Ezandleni zezizukulwana zengcibi yentsimbi kunye nakwiziko lomlilo weemvakalelo, i-ironware ngokuthe ngcembe yaphulukana "nomhlwa" yakudala kwaye yakhazimla. ngaloo ndlela kwazalwa izitayile ezingenasiphelo zeemveliso zobugcisa bentsimbi. Ubuchwephesha bakudala be-blacksmithing bathi shwaka kancinci kancinci, kwaye i-ironware yapheliswa luphuhliso olukhawulezayo lobugcisa kwimbali yokugoba kwentsimbi.
1. Ubugcisa bentsimbi kunye nokusingqongileyo
Ubugcisa bentsimbi buhambelana kwaye bunomfanekiso kunye nendawo engqongileyo. Kwakwilali enye, lo wohlukile kwenye. I-A yahlukile ku-B. Abantu bayakwazi ukwahlula izitayile ezininzi kwindawo encinci kakhulu, ukusuka kwelinye ikhaya ukuya kwelinye, becinga ngoyilo oluhle kakhulu lobuhle, i-en curvature enomtsalane okanye imilo eyothusayo!
Umlinganiselo kunye nembono isengqiqweni, intle, inochuku oluphezulu lobugcisa ukuze abahambi ngeenyawo bamise kwaye babathande. Ezi mveliso zobugcisa zentsimbi zibonisa incasa yenkcubeko yabanini abakhethekileyo kunye namaqela abathengi, ngakumbi ulonwabo lwenkcubeko kunye neendawo zokutyela. Abantu abazizityebi kunye nabahloniphekileyo banokuba nenkosi enjalo yeemveliso zentsimbi ezibizayo, ezona ziqhelekileyo ukusuka kwishumi elinesixhenxe okanye elinesibhozo.
2. Eiimveliso co-friendly
Uninzi lweemveliso zobugcisa zentsimbi zithobela ukukhuselwa kwendalo. Ngaphandle kwale mpahla ye-eco-friendly yeemveliso zobugcisa bentsimbi, kulula ukusebenza kunye nokujika. Ngomsebenzi omhle, inkqubo enengqiqo, ubugcisa obuqinileyo, imbonakalo yeemveliso igudiswe kakuhle, isusa i-burrs kunye nemikrwelo; obu buchule budityaniswe ne-anti-corrosion kunye ne-anti-rust unyango usebenzisa i-uniform yokwambathisa inika abantu imveliso ehlala ixesha elide.
Namhlanje, abantu abaninzi bakhetha iimveliso zobugcisa bentsimbi ngenxa yezizathu ze-aboce. Amandla, ukumelana okuphezulu nomoya kunye nemvula, ukusetyenziswa ixesha elide, ukulwa nezinambuzane njl.
3.Ezoqoqosho inkqubo .
Ixabiso lomsebenzi wentsimbi ngomnye umcimbi. Namhlanje, imvuselelo kunye nokusetyenziswa ngokubanzi kobugcisa bentsimbi ayikho ukuphindaphinda kwembali. Nakule nkulungwane yama-21, akukho ntsimbi ibaluleke ngaphezu kwentsimbi, yaye oku bekuyinyaniso kangangeminyaka engama-3 000. Iintsimbi ezisebenzayo zentsimbi zenzeka phantse kuzo zonke iindawo zehlabathi, kwaye iindlela ezahlukeneyo zobuchule zinokuvelisa iintlobo zentsimbi ezinoluhlu olukhulu lweempawu. Ngokwembali, bekukho iindlela ezintathu ezisisiseko zentsimbi: intsimbi ekhandiweyo, intsimbi etyhidiweyo, kunye nentsimbi. Iingcibi ezithembele ngokupheleleyo kumava kunye nokuqwalaselwa kwazo ziye zafumanisa nganye yezi ndlela zaza zazisebenzisa kangangeenkulungwane. Kwada kwayinkulungwane ye-19 apho kwaqondwa iiyantlukwano ezisisiseko phakathi kwazo, ngokukodwa indima yekhabhoni.
Intsimbi ekhandiweyo iphantse ibe yintsimbi esulungekileyo, isinyithi esinokusetyenzwa ngokukhawuleza kwi-forge kwaye siqinile kwaye sekunjalo i-ductile, oku kuthetha ukuba inokubethelwa kwimilo. I-iron cast, kwelinye icala, inomlinganiselo ophawulweyo wekhabhoni, mhlawumbi ukuya kuthi ga kwipesenti ezintlanu, exutywe kunye nesinyithi (kuzo zombini iikhemikhali kunye nokudibanisa ngokomzimba). Oku kubandakanya imveliso, ngokungafaniyo nentsimbi ekhandiweyo, inokunyibilika kwiziko lamalahle kwaye ngaloo ndlela igalelwe kwaye iphoswe kwiziko. Kunzima kakhulu kodwa kukwashwabene. Ngokwembali, intsimbi etyhidiweyo yayiyimveliso yeziko lokuqhushumba, eyaqala ukusetyenziswa ngabenzi besinyithi baseTshayina mhlawumbi kwiminyaka engama-2,500 eyadlulayo.
Kwinkulungwane yokugqibela kunye nesiqingatha, eyona ndlela ibalulekileyo yentsimbi ibe yintsimbi. I-Steel ngokwenene luhlu olukhulu lwezixhobo, ezineempawu ezixhomekeke zombini kwixabiso lekhabhoni equlethwe-ngokuqhelekileyo phakathi kwe-0.5 kunye ne-2 ekhulwini-kunye nezinye izinto zokudibanisa. Ngokuqhelekileyo, intsimbi idibanisa ukuqina kwentsimbi ekhandiweyo kunye nobunzima bentsimbi, ngoko ke ngokwembali iye yaxabiswa ngokusetyenziswa okunjengamacangca kunye nemithombo. Ngaphambi kombindi wenkulungwane ye-19, ukuphumeza olu lungelelwaniso lwezakhiwo olufuna ubugcisa bomgangatho ophezulu, kodwa ukufunyanwa kwezixhobo ezitsha kunye nobuchule, njengokunyibilikiswa kwentliziyo evulekileyo kunye nenkqubo yeBessemer (inkqubo yokuqala yemizi-mveliso engabizi kakhulu yokuvelisa intsimbi eninzi. ukusuka kwintsimbi), eyenziwe ngentsimbi engabizi kwaye ininzi, igxotha abo bakhuphisana nayo phantse yonke imisebenzi.
Isizathu esibangela le mpumelelo yobugcisa bentsimbi yinkqubo yayo yeendleko eziphantsi.
Ixesha lokuposa: Nov-16-2020
Metal Garden Decoration, Garden Decor Metal, isibane esikhokeleyo, ilanteni yokuhombisa, izibane zelanga, UbuGcisa beGadi banamhlanje,